Aoka hazava fa azo trandrahina ny bolabola
2010-08-23 @ 22:44 in Ankapobeny
Mety hanaitra anao mpamaky izany teniko izany saingy izay no marina. Resaka bolabola na andramena na ilay antsointsika voazanaka ara-tsaina hoe "bois de rose" indrindra no resahiko ary tsy lainga izany... saingy ny olana dia tsy voafehy ilay fitrandrahana azy, izay noferana soa amantsara tany aloha tany (porofo indrindra ny fisian'ny fanondranana hatry ny ela), fa maika ny hahazo vola loatra ny sasany ka lasa nanapotika vetivety ny tontolo iainana ka izay no tsy mampanara-dalàna ilay fitrandrahana tafahoatra. Tsy te-hanoratra lava intsony aho satria somary lava ihany ilay ato amin'ny rohy ato [teny malagasy] saingy nahaliana dia nahaliana ka tiako zaraina aminareo. Tiako sy faniriako indrindra raha mamoaka ny hevitrareo ao ianareo na dia mety tsy itovizana aza ny hevitra. Ho an'izay mahay teny vahiny ka mampitaha azy amin'ny teny malagasy ato...faniriako ihany koa raha milaza ny tokony ahitsy ianareo eo amin'ny famoahan-kevitra ao. Azamanahy raha tsy mivoaka eo noho eo ny hevitrao fa hipoitra ho azy eo ihany izy rehefa mandalo izahay mamoaka ny hevitrao. Tsy sanatria fanakanana ny hevitrao no antony fa ialàna amin'izay mety ho ompa na teny ratsy ihany.
Raha mahaliana anao ny hamaky azy amin'ny teny frantsay dia [jereo ato], ary raha amin'ny teny anglisy mihitsy aza dia [ato indray vakiana]. Ireo miloko manga ireo tsindriana raha tsy azonao ny tiako lazaina ary mirary mandrakariva raha mamoaka ny hevitrareo ianareo na karazana fankasitrahana kely fotsiny ihany aza vao maika mahafaly anay sy mandrisika anay hanome vaovao ho anareo.
Jentilisa 24 aogositra 2010 amin'ny 00:45